Gebreselassie oo taageeraya ciyaartooyda Ruushka - BBC News Somali
Gebreselassie oo taageeraya ciyaartooyda Ruushka
10 Febraayo 2016
Haile Gebreselassie oo ah ninka sida weyn loogu arko inuu yahay kii ugu fiicnaa ciyaaraha fudud ee Afrika, waxaa uu sheegay inay tahay in Ruushka loo oggolaado inay ka qayb galaan ciyaaraha olympic-ga ee lagu qaban doono magaalada Rio, inkastoo dhowaan laga joojiyay tartamada caalamiga ah iyadoo lagu eedeeyay adeegsiga walxa awoodda ciyaartoyda kordhiya oo dowladdu wax ka ogeyd.
Isagoo BBC-da la hadlayay Mr Gebreselassie waxaa kaloo uu sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo baaritaannada lagu sameeyo ciyaartoyda dalalka Kenya iyo Itoobiya. Waxaa uu magaaladiisa oo ah caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ugu warramay Tim Franks.
Haile Gebreselassie waxaa uu sheegay in dhibaatada ka taagan ciyaaraha fudud ee caalamka ay isaga murugo qota dheer ku reebtay. laakiin mamnuucid wadar ahaaneed oo lagu soo rogo ciyaaraha fudud ee Ruushka ee magaalada Rio ay khalad noqon doonto: Sababtoo ah qaar aan waxba galabsan ayaa dhibaato ku dhacaysaa, iyo sabab kaloo ah mas'uuliyiinta Ruushka oo u muuqday inay ficilladoodii nadiifinayaan.
Wax badan ayaase laga qaban karaa dalkiisa hooyo. Ciyaartoygan ugu wanaagsan Itoobiya waxaa uu sheegay in baaritaanno lagu sameeyo dalkiisa iyo dalka ay deriska yihiin ee Kenya loo baahan yahay in la horumariyo.
Qiil ma noqonayso in la yiraahdo, dhulka miyiga ah, way adag tahay in dabagal lagu sameeyo baaritaannada ciyaartoyda.
Mr Gebreselassie waxaa kaloo uu xaqiijiyay damaciisa siyaasadda, waa laga yaabaa, ayuu yiri, inaan noqdo ra'iisal wasaaraha ama madaxweynaha dalka Itoobiya.
Waxaa uu diiday wax uu ku sheegay in hoggaamiyeyaasha Afrika qaarkood ay rumaysan yihiin oo ah inaan la beddeli karin. Hase yeeshee waxaa kaloo uu dimoqraadiyadda ku tilmaamay, marka laga hadlayo Itoobiya oo kale, inay tahay wax lagu raaxeysto oo kale.